Sun / 2019-Apr-21
ने.कपा. एमाले र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)को पार्टी एकतालाई ने.क.पा. (मसाल)ले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र त्यसलाई स्वागत गर्दछ । चुनावको बेलामा भएको वामपक्षीय गठबन्धनको बेलादेखि नै हामीले उनीहरूको पार्टी एकताको पक्षमा मत प्रकट गर्दै र त्यसको सफलताको लागि शुभकामना दिंदै आएका थियौँ । जुन बेला उनीहरूका बीचको त्यस प्रकारको एकतामा समस्या, बाधा वा आशङ्काहरू उत्पन्न भए, त्यो बेला पनि हामीले उनीहरू बीचको पार्टी एकतामा नै जोड दिएका थियौँ । अहिले त्यो एकता सम्पन्न भएकोमा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतालाई स्वागत गर्ने वा त्यसबारे प्रसन्नता प्रकट गर्ने बेलामा उनीहरूसित हाम्रो गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक मतभेद भएको कुरालाई पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । उक्त पार्टी एकतालाई हामीले राजनीतिक कारणले नै समर्थन गरेका छौँ । सैद्धान्तिक कारणले होइन । माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूबाट उनीहरूको विचलन भएको वा उनीहरूले दक्षिणपन्थी बाटो समातेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूको बीचमा भएको पार्टी एकताबाट देशमा सच्चा र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ । उनीहरूका बीचको एकताले उनीहरूको सङ्गठनलाई ठूलो र शक्तिशाली बनाइदिएको छ । तर त्यो कारणले नै त्यो सङ्गठन कम्युनिष्ट पार्टी भएको निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन । त्यसैले सैद्धान्तिक आधारमा उनीहरूसँग हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहने छ । निश्चय नै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसित पार्टी एकताको प्रश्नमा बहस गर्ने कुरामा हामी सहमत भएका थियौँ । त्यस प्रकारको बहसले पार्टी एकतासित सम्बन्धित मूलभूत सैद्धान्तिक प्रश्नहरू के हुन् र कसरी सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुन सक्दछ ? त्यो कुरा बुझ्न मद्दत पुग्ने छ । उक्त प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद भएता पनि देशको तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नमा त्यो एकताको सकारात्मक महत्व छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट र दृढ छौँ ।
वामपक्षीय शक्तिहरू मात्र होइन, नेका र मधेशवादी शक्ति समेतको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा कैयौँ उपलब्धिहरू भएका छन् । जस्तै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि । तर विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले ती उपलब्धिलाई समाप्त गर्न बेग्लाबेग्लै प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । अहिले पार्टी एकता गरेका दुवै शक्तिहरू ती नीतिका पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरूको एकताबाट तिनीहरूको रक्षाको लागि मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि पनि गम्भीर प्रकारको खतरा छ । त्यो खतरा सबैभन्दा बढी भारतीय विस्तारवादबाट नै छ । त्यसैले देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्ना ती विस्तारवादी योजना पूरा गर्न उपयोग गर्दै आएको छ । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यसले वर्तमान वामपक्षीय सरकारलाई पनि आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेको छ वा लगाउने छ त्यो सम्भव नभएमा त्यसलाई अपदस्थ गराउने षडयन्त्र गर्ने छ । साम्राज्यवादी देशहरूको लागि कुनै पनि देशको नाम मात्रको कम्युनिष्ट सरकार पनि सह्य हुँदैन । त्यस्तो सरकार संसदीय चुनावबाट निर्वाचित भएको भएपनि त्यसलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । संसारमा त्यस प्रकारका उदाहरणहरूको अभाव छैन । त्यस प्रकारको खतराबाट नेपालको वर्तमान वामपक्षीय सरकार पनि अपवाद छैन । ती कुराहरूमाथि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउँदै अहिलेको सरकारले देशको राष्ट्रियताको रक्षाको लागि पूरा प्रयत्न गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता हुन नसकेको भए त्यसको असर सरकारमा पर्ने र त्यो भङ्ग हुने सम्भावना थियो । त्यसो भएमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सत्तामा पुग्ने खतरा थियो । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने खतरा थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा भएको पार्टी एकताले त्यस प्रकारको खतरा टरेको छ र त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरूबाट देश बच्ने आशा गर्नको लागि आधार तयार भएको छ । पार्टी एकतापछि उनीहरूले आफ्नो ६ बुँदे घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण मार्फत नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुने कुरा बताएका छन् । उनीहरूको पार्टी एकताबाट हामीले त्यही कुराको आशा गरेका छौँ र त्यही आशा अनुसार नै हामीले उनीहरूको पार्टी एकता र सरकारलाई पनि समर्थन गरेका छौँ । त्यो दिशामा उठाउने उनीहरूका कार्य र नीतिहरू प्रति हाम्रो समर्थन हुनेछ । तर उनीहरू त्यस प्रकारको प्रतिबद्धताबाट बिचलित भएमा उनीहरूको नीति र कार्यका विरुद्ध सम्झौताहीन र दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ । तर हामीले आशा गर्दछौँ र शुभकामना प्रकट गर्दछौँ उनीहरू आफ्नो प्रद्धिवता अनुसार नै अगाडि बढ्दै जानेछन् ।
मिति ः २०७५ जेष्ट ४ गते